Ny angovo herinaratra any Espaina dia namokatra hazavana nandritra ny zato taona | Fanavaozana maintso
Ny angovo azo avy amin'ny rano ao Espana
Tomas Bigorda | | angovo hydraulic, Angovo Hygroelectric
Ny firenentsika dia manana herinaratra mahery vaika mahery vaika, izay novolavolaina nandritra ny mihoatra ny 100 taona. Misaotra an'izany fa misy rafitra famokarana herinaratra mahery vaika sy mahery vaika ankehitriny.
Ao anatin'ny angovo azo havaozina nohajaina tany Espana, ny herinaratra mandeha amin'ny herinaratra Izy io no teknolojia fanamafisana sy matotra indrindra, noho ny fampiasana ny haitao sy ny fisian'ny tohodrano maro.
1 Herinaratra mandeha amin'ny herinaratra
2 Fampandrosoana teknolojia
Herinaratra mandeha amin'ny herinaratra
Misy fomba fiasa roa momba ny fitrandrahana herinaratra elektrika: ny voalohany, ireo zavamaniry ao anaty rano izay misambotra ampahany amin'ny fikorianan'ny rano ary mitondra azy io ho turbine ary aorian'izay dia miverina amin'ny renirano izy ireo.
Matetika, mampiasa elanelam-pahefana ambany izy ireo (mazàna latsaky ny 5 MW) ary mitentina 75% amin'ny tsena. Anisan'izany ny "lakandrano manondraka afovoany", izay mampiasa ny tsy fitoviana amin'ny rano amin'ny lakandrano manondraka hamokatra herinaratra.
Ny zavamaniry eo an-tongony onja dia ireo izay, amin'ny alàlan'ny fananganana tohodrano na fampiasana ny efa misy, dia afaka mifehy ny fikorianany. Matetika izy ireo dia manana ambaratongan'ny fahefana lehibe mihoatra ny 5 MW ary izy ireo dia maneho ny 20% eo amin'ny tsena any Espana. Ao anatin'izany ireo zavamaniry mibontsina na azo ovaina, ireo zavamaniry izay, ankoatry ny famokarana angovo (mode turbine), dia manana fahaizana mampiakatra rano amin'ny fitahirizana na reservoir amin'ny alàlan'ny fandaniana angovo elektrika (pumping mode).
Raha fintinina, any Espana dia misy totalin-drano fitahirizana 55.000 hm3, ka ny 40% amin'izany dia mifanaraka fitahirizana rano mandeha amin'ny rano, iray amin'ireo tahiry avo indrindra any Eropa sy manerantany.
Ara-tantara, ny fivoaran'ny angovo herinaratra ao Espana dia nitombo, tato anatin'ireo taona faramparany dia niaina fihenana lehibe ny fandraisany anjara tamin'ny famokarana herinaratra tanteraka, satria ny angovo azo havaozina hafa dia nampidirina tao amin'ny fifangaroan'ny angovo.
Na izany aza, dia mbola mitohy ho iray amin'ireo fanavaozana mahomby indrindra miaraka amin'ny herin'ny rivotra. Ny angovo Hydroelectric dia manana fahaiza-manao napetraka ao amin'ny tanintsika 17.792 MW, izany dia maneho ny 19,5% amin'ny totaliny, ny herinaratra dia nihoatra noho ny tsingerina mitambatra gazy izany, miaraka amin'ny totalin'ny 27.200 MW, no teknolojia mitarika amin'ny alàlan'ny herinaratra napetraka (24,8% amin'ny totaliny), ny mifanohitra amin'izany kosa, ny angovo avy amin'ny rivotra, dia manana fahefana 23.002 MW (22,3%).
Tamin'ny 2014, ny fandraisan'anjaran'ny angovo avy amin'ny herinaratra ho an'ny famokarana herinaratra eto amin'ny firenena dia 15,5%, miaraka amin'ny totalin'ny 35.860 GWh, io isa io dia maneho fiakarana 5,6% raha oharina tamin'ny taona lasa. Na eo aza ny tsara fitondran-tena mandeha amin'ny herinaratra, no teknolojia fahaefatra amin'ny famokarana, ao ambadiky ny niokleary (22%), ny rivotra (20,3% 9 ary ny arina (16,5%).
Ato ho ato dia antenaina fa hitombo hatrany ity teknolojia ity eo anelanelan'ny 40 ka hatramin'ny 60 MW isan-taona, satria ny mety ho herin'ny herinaratra azo inoana fa maharitra maharitra, dia mihoatra ny 1 GW.
Catalonia, Galicia ary Castilla y León no vondrom-piarahamonina mahaleo tena manana ny avo indrindra nametraka hery amin'ny sehatry ny herinaratra, satria izy ireo no faritra manana loharano betsaka indrindra ao Espana
Tsikelikely, ny fivoarana ara-teknolojia dia nahatonga ny angovo mini-hidy manana vidiny mifaninana eo amin'ny tsenan'ny herinaratra, na dia miovaova arakaraka ny typology zavamaniry ary ny hetsika hotanterahina. Ny toby famokarana herinaratra dia heverina ho mini-hydro raha manana herinaratra napetraka latsaky ny 10 MW izy io ary mety ho rano avy any amin'ny renirano na eo am-pototry ny tohodrano.
Amin'izao fotoana izao, ny microturbines hydraulic dia mivoatra miaraka amin'ny hery ambany noho ireo 10 kW, ireo no tena ilaina hanararaotana ny hery kinetika ao anaty renirano ary hiteraka herinaratra ao faritra mitokana. Ny turbine dia mamokatra herinaratra mivantana amin'ny fifandimbiasana ankehitriny ary tsy mila rano latsaka, fotodrafitrasa fanampiny na vidin'ny fikolokoloana avo.
Androany, ny fampiroboroboana ny sehatry ny angovo herinaratra Espaniola dia kendrena hahazoana fahombiazana bebe kokoa, hanatsarana ny fahombiazan'ny fotodrafitrasa ankehitriny. Ny tolo-kevitra dia atokana any amin'ny fanarenana, fanavaozana, fanatsarana na fanitarana ireo zavamaniry efa napetraka.
Espaniôla dia manodidina ny 800 eo ho eo ny zavamaniry hydroelectric, misy karazany isan-karazany. Misy zavamaniry 20 mihoatra ny 200 MW, izay miara-maneho ny 50% amin'ny herin'ny herinaratra. Amin'ny lafiny hafa, misy tohodrano kely am-polony miaraka amin'ny herin'ny latsaky ny 20 MW, zaraina manerana an'i Espana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo Hygroelectric » Ny angovo azo avy amin'ny rano ao Espana
Murcia dia mampitombo ny angovo azo havaozina miaraka amin'ny fanampiana sy fanampiana
Toeram-piompiana rivotra an-dranomasina vaovao any amin'ny rano britanika izay natolotry Iberdrola